Darktable 2.6.3 ဗားရှင်းသစ်သည်ကင်မရာများစွာအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည် Linux မှ
Darktable 2.6.3 ဗားရှင်းသစ်သည်ကင်မရာများစွာအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်
Darktable 2.6.3 ဗားရှင်းအသစ်ကိုမကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ခဲ့သည် ၎င်းသည်အင်္ဂါရပ်အသစ်များ၊ ချို့ယွင်းချက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ကင်မရာများစွာအတွက်အထောက်အပံ့နှင့်အတူလူအများစုတို့ပါ ၀ င်သည်။ Darktable ကိုသတိမပြုမိသူများအတွက်ထိုအရာကိုသိသင့်သည် ဒီဟာ Cross-platform image editing software ပါ ၎င်းသည်“ ကုန်ကြမ်း” ဓါတ်ပုံများကိုအထူးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကင်မရာ၏အာရုံခံကိရိယာမှအချက်အလက်များ။
Darktable RAW ပုံရိပ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကြီးမားသော module တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဓာတ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အမျိုးမျိုးသောစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်ရန်။
1 Darktable 2.6.3 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
2 Linux တွင် Darktable 2.6.3 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Darktable 2.6.3 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
ဒီ Darktable ဗားရှင်းအသစ်ဟာအခြေခံအားဖြင့်ပါ ကိရိယာများအတွက်အထောက်အပံ့ထည့်သွင်းရန်အတွက်လာသည့်ဗားရှင်း၊ သို့သော်၎င်းသည် application ၏အမှားအယွင်းများကိုဖြေရှင်းရန်အထူးသဖြင့်အတွက်ဖြစ်သည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအဖွဲ့ကပေါင်းစပ်ခဲ့သောဂိမ်းကို disable လုပ်ရန် အဆိုပါအထိမ်းအမှတ် app ကိုရန် Fပြီလူမိုက်နေ့။
အချို့သောလူများအတွက်မူထိုအကြံအစည်သည်မူလမူရင်းဟုထင်ရသော်လည်း ဖျော်ဖြေရေးအပေါင်းတို့နှင့်ပျော်စရာအထက်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအသုံးပြုသူများနှောင့်အယှက်နေကြသည် ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်အဖွဲ့နှင့်သူတို့၏မကျေနပ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြချေ။
ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာ၏ဤဗားရှင်းတွင်ဒါကြောင့်ဖြစ်သည် ဒီဂိမ်းကိုရရှိနိုင်ပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားသည် developer များအနေဖြင့် Darktable အတွင်းတွင်ဂိမ်းကို enable and / disable လုပ်ရန် option တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။
၁၇ မီလီမီတာပုံနှိပ်စက်၏အနားသတ်ကိုပုံမှန်အနေနှင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းကန့်သတ်ချက်အားပိတ်ထားပြီးချွန်ထက်စေရန်အတွက်အထောက်အကူများထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ၁၇၂ မီလီမီတာပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်၏အနားသတ်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်အခြားကိရိယာတစ်ခုတွင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်ရှိခဲ့သည်။
Fujifilm X-T30 (ချုံ့)
လီကာစီ (အမျိုးအစား ၁၁၂) (၄: ၃)
လီကာမေး (အမျိုးအစား ၁၁၆) (dng)
Leica SL (အမျိုးအစား ၆၀၁) (dng)
Leica V-LUX (အမျိုးအစား ၁၁၄) (၃: ၂၊ ၄: ၃၊ ၁၆: ၉၊ ၁: ၁)
Panasonic မှ DC-G90 (၄း၃)
Panasonic မှ DC-G91 (၄း၃)
Panasonic မှ DC-G95 (၄း၃)
Panasonic မှ DC-G99 (၄း၃)
Panasonic DC-ZS200 (၃: ၂)
Panasonic DMC-TX1 (၃: ၂)
Sony က DSC-RX0M2
Sony က ILCE-6400
Sony က ILCE-7RM4
နောက်ဆုံး၊ ယခုအသစ်ထွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုသိလိုပါကအောက်ပါလင့်ခ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Linux တွင် Darktable 2.6.3 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Darktable 2.6.3 ဗားရှင်းသစ်သည်ကင်မရာများစွာအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်
Cloud Hypervisor 0.3 ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော open source VMM
အီလက်ထရွန် ၇.၀ သည် Chromium 7.0, Node.js 78 နှင့် ပို၍ အခြေခံသည်